Hambalyo Waamo State... iyo Baaq ku Socda Dowladda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Kulan gaar ah oo ay isugu yimaadeen Mas'uuliyiinta iyo Madaxda Xisbiga Waamo National Party, isla markaana ay ka soo qayb galeen Waxgarad, Aqoonyahan, Dhallinyarada iyo Haweenka Xisbiga Waano National Party, ayaa 20/5/2013 ku qabsoomay Magaalada Oslo ee dalka Norway.
Kulanka ayaa si weyn loogu falanqeeyey hawlaha ka soo cusboonaaday deegaamada Waamo iyo Waaq-dhoobey. Dood iyo falanqayn dheer kaddib waxaa kulanka ka soo baxay war-saxaafadeed ku aaddan arrimaha deegaamada Kismaayo iyo guud ahaan xaaladda Somaliya. War-saxaafadeedka ayaa u qornaa sidan:
1. Waxaa si weyn oo aan kala har lahayn kulankaaan loogu taageeray xilka M/weynenimo ee Mudane Cumar Buraale Axmed loogu Doortay M/weynaha Waamo State ee Deegaanka Kismaayo iyo nawaaxigeeda. Mudane Cumar Buraale Axmed waa shaqsi si rasmi ah u metelaya danaha dhabta ah ee dadka degaanka. Deegaanku waa kiisii uu asal ahaan ka soo jeeddo, inta kalena waa soo-galooti boob iyo booqasho ku yimid. Xisbiga waamo wuxuu u arkaa Xilka Madaxweynenimo ee loo doortay Mudane Cumar Buraale Axmed in uu xal u yahay in degaanka Waamo iyo Waaq-dhoobeey si nabad ah loogu wada noolaado.
2. Dhammaan xubnihii kulanka ka soo qayb galay waxay muujiyeen sida ay uga go'an tahay wax kastaba ha ku qaadatee in ay taageero hiil iyo hooba u fidinayaan Maamul Dowladeedka Waamo State iyo xukuumadda uu hoggaaminayo Mudane Cumar Buraale Axmed.
3, Kulanka waxaa digniin culus loogu jeediyey kuwa damaca hunguri doon uu wado ee Deegaanka Kismaayo iyagu is-lahaysiiyey. Dhulku waa Waamo, dadkeeduna waa reer Waamood. Galti iyo guri baa la kala yahay. Wax isku murugsan ma jiraane xaqiiqada yaan la iska indha tirin, oo intii laga yimaado khiyaaliga Kismaayo lagu boobayo, dab hor leh hadda yaan maatida loo horseedin.
4. Waxaa nasiib darro ah in biiri-qaatayaal weligoodba dallaaliin ahaa, oo carruurtooda iyo maatadooda meelo fog soo dhigtay in ay maanta qori dab leh intay u soo dhiibaan Axmed Madoobe uu isaguna maatadiisa dab ku qabto. Goobta lagu dagaalami doono waa deegaanka Waamo, lamana garan karo waxa uga qubanaya Faroole, Cumar C/rashiid, Cali Khaliif, C/weli Gaas, Xasan Abshir iyo kuwa la midka ah. Axmed Madoobe Allha tusiyo dariiqa saxda ah, hana ku tooso halka danta maatadiisu ku jirto.
5. Xisbiga Waamo National Party waxuu Dowladda Kenya ku Cambaareynayaa ku Xadgudubka Xududda Soomaaliya iyo Madaxbanaanideed, Faragalinta Siyaasadeed ee aay ku heyso Dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Haddaanu nahay Shacabka Kismaayo, waanu soo dhoweyneynaa doorka ay Kenya ka qaadatay ka saarida Shabaab Kismaayo, balse sina ugu gorgortami mayno masiirka Ummadda Somaliyeed.
6. Kulanka waxaa aad loogu dhaleeceeyey Xildhinaada Somaliyeed ee Mooshinka ka keenay Dowladda Somaliya. Arrintaas waxaa wada shaqsiyaad dano gaar ah wata. Waxaa kuwaas fidnada wada ka mid ah Sh. Xasan Sh. Aden. Sh. Sakiin waa Nin Dambi Soomaali ka galay asaga iyo kuwo ay isku danaha yihiin.
7. Mooshinka ka dhankaa Dowladda Somaliyeed waa mid lagu doonayo sidii Dowladda loo lug jiidi lahaa oo looJilaafeyn lahaa. Waa Tilaabo Jariimo Qaran oo qaadeen kuwo la soo kireystay. Waxaan Naga talaa in tallaabo laga qaadaa kuwa Magaca iyo Maamuuska Soomaaliya meesha xun dhigaya.
8, Xisbiga Waamo National Party waxuu Dowladda Soomaaliya ugu Baaqay in ay tallaabo ku habboon ka qaaddo Jabhaddaha, Ururada aan Shaciga aheen iyo Shaqsiyaadka Dhibaatada ku haya Bulshada Somaliyeed.Sidoo kale waxaan Shacabka Soomaaliyeed ugu Baaqeynaa waa ku in ay Gacan ka geystaan Dadaalka ay wado Dowladda Soomaaliya oo Shalay u Curatay.
Xafiiska Warfaafinta Xisbiga Waamo National Party